MPITORITENY 2.12-26	F. 6 | Fitandremana Ankadifotsy
MPITORITENY 2.12-26	F. 6
Ny fahendrena. Mitohy hatrany ny fandinihan’i Mpitoriteny ny fiainana ka ahatsapany fa na ny fahendren’ny olona aza dia toa mbola zava- poana ihany koa. Ahoana no mahatonga izany? Ekeny ihany aloha fa tsara ny fahendrena noho ny fahadalana (13a), toy ny fahatsaran’ny mazava oharina amin’ny maizina (13b), saingy ny fihafaran’izy roa tonta ireo dia tena mitovy tanteraka. Samy ho faty ihany izy roa ary samy ho adino ny fahatsiarovana azy (16).
Ny fisasarana. Tena mahatsiaro tena ho nisahirana mafy i Solomona amin’ny maha Mpanjaka azy namory fananana be dia be, nanao ny ainy tsy ho zavatra kanefa rehefa nieritreritra kely izy hoe hoan’iza moa ireo nisasarany rehetra ireo rehefa tsy eo intsony izy? Hoan’izay handimby azy! (18) Ka ho olon-kendry ve sa ho adala io handimby azy io?(19) Satria izy nisasatra mafy tamin’ny fahendrena. Dia hoy izy hoe : ”Hitodika amin’ny famoizam-po sy ny fahakiviana aho” (20).
Avy amin’Andriamanitra ny fahasambaran’ny olona. Eto i Solomona vao milaza fa ny fahasambaran’ny olona dia tsy avy aiza fa avy amin’Andriamanitra tokana ihany. Ny mihinana sy misotro ary mifaly amin’ny fisasaran’ny tanany (24), izany no hany mitondra fifaliana hoan’ny olona kanefa izany dia fanomezana avy amin’Andriamanitra. Ny fisasarana rehetra ivelan’Andriamanitra dia zava-poana avokoa. Ny olona ankasitrahan’Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana (26).
Ny haren’ny mpanota. Asain’Andriamanitra manangona harena ny mpanota mba hotehirizina hoan’ny marina (26). Efa voasoratra tao amin’ny bokin’ny Ohabolana ihany koa izany manao hoe: ”Fa ny haren’ny mpanota kosa voatahiry ho an’ny marina” (Ohabolana 13.22b). Fampaherezana hoantsika izany raha iharan’ny fanambakana sy ny tsy rariny isika.